Wareysiga wakiilka Opera (biraawsar) la cusbooneysiiyay | Laga soo bilaabo Linux
Wareysiga wakiilka Opera (biraawsar) la cusbooneysiiyay
dabogal 92 | | Aplicaciones
Dhowr maalmood ka hor ayaa naloo siiyay fursad aan su'aalo ku weydiinno qof mas'uul ah / ku xiran horumarinta biraawsarka webka Opera.
Waxaan halkan kuugu dhaafayaa iyaga inaad aqriso, jawaabahoodu runtii waa kuwo xiiso leh:
<° Linux: Wanaagsan,
Marka hore, farxad aad u tiro badan, magaceygu ​​waa Francesco waxaana sharaf weyn noo ah fursadan aad na siisay. Xaqiiqdii waa sharaf in wakiil ka socda bog furahan aad u fiican uu na caawin karo.
Silsilado: Francesco wanaagsan,
Anigu waan ahay Charles McCathie Nevile (oo loo yaqaan Silsilado si loo fududeeyo nolosha 😉), Agaasimaha Heerarka ee Opera, Isbaanishka ku hadla in kasta oo uu Australiyaan yahay. Waan ka xumahay daahitaanka jawaabta, waxaan ku maqanahay fasax ...
<° Linux: Markii aan ka hadlayno internetka, waxaan ka hadleynaa heerarka, waxaan ka hadleynaa luqado kala duwan iyo qaabab kala duwan oo loo adeegsado websaydhada, taas oo inta badan keenta in isla degelku si fiican uga dhex muuqdo hal biraawsar oo uusan ku jirin kuwa kale. Sideed u malaynaysaa inuu internetku xilligan yahay? Heerarkan miyaa la ixtiraamayaa?
Silsilado: Shabakadu waa shay nool oo isbedelaya, markaa shay dabeecaddiisu markasta is beddelayso. 10-kii, 5-tii iyo 2-dii sano ee la soo dhaafay, ixtiraamka heerarka ayaa wax badan kordhay, in kasta oo ay taasi macnaheedu ahayn in websaydhka oo dhan laga dhigay mid waafaqsan dhammaan heerarka la xiriira.
Xusuusnow in goobaha qaar aysan ku jirin horumarin, waligood isma beddeli doonaan, in kasta oo ay weli jiraan. Qaar kale si tartiib tartiib ah ayey isu beddeli doonaan iyo kiisaska sida bangiyada ama codsiyada warshadaha oo ay la socdaan malaayiin isticmaale, waxaa la fahamsan yahay in mararka qaar horumariyayaashoodu xoogaa cabsi qabaan. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga heerarka ayaa hadda si wanaagsan loogu aqoonsaday inay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo in degelku yeelan doono nolol dheer oo waxtar leh, oo sida ugu fiican ugu shaqeysa biraawsarayaasha.
Waana inaan sidoo kale tixgalino horumarka iyo hal-abuurnimada. Si aad u abuurto heer cusub, waa inaad marka hore ku tijaabisaa adduunka dhabta ah. Qeexitaanku waa fududahay in la qoro, laakiin ma dabooli karo baahiyaha qof walba. Taasi waa sababta habka u soo bandhigaya tikniyoolajiyad cusub dhagaystayaal badan oo kala duwan ay muhiim tahay. Goobaha qaarkood waxay tijaabin karaan tikniyoolajiyadan horumarineed, laakiin maanta waxaan u maleynayaa habka ugu caamsan ee horumariyayaashu u sameeyaan qaladaadka waa adeegsiga tikniyoolajiyad aan caadi ahayn oo loogu talagalay hawl ay tahay inay ahaato mid guud guud ahaan. Tusaale ahaan, haddii aan doonayo inaan abuuro ciyaar aan lacag ku kasbado, dhib kama qabo inaan shacabka u sheego inay u baahan yihiin in ay adeegsadaan biraawsar noocan oo kale ah, taleefan noocaas ah, iwm, laakiin haddii aan wax u qabto jaamacad dawladeed, ama adeeg guud, waa xadgudub in lagu soo rogo bulshada guud xulashada aaladda noocaas ah ama nidaamka shaqeynta iyo marar badan, in kastoo aan xaq u leeyahay inaan go'aansado inaan taas sameeyo, maxaa yeelay waa mashruuc gaar loo leeyahay sida wargeys, waxaan lumin karaa suuq badan marka lagu daro inaan naftayda ka iibiyo bixiyaha nidaamka aan ku saleysanahay inaan u baahdo inaan awoodo inaan iibiyo adeegeyga.
<° Linux: Labadii sano ee ugu dambeysay ama wixii la soo dhaafay, waxaa jiray hadal hayn badan oo afafku jecel yihiin HTML5 ama maktabadaha sida jQuery ayaa iman kara si loogu beddelo Flash mustaqbalka. Sideed u aragtaa arrintan? Runtii HTML5 bedel wax ku ool ah?
Laakiin waxaa jira horumariyeyaal badan oo sannado khibrad u leh Flash-ka oo aan aqoon HTML5 ama awooddeeda, oo awood u leh inay soo saaraan shey (barnaamij, ama xitaa "degel") flash ah, waxayna sii wadi doonaan inay intaas sii iibiyaan muddo dheer. wali.
<° Linux: Qof walba wuu ogyahay in Opera uu yahay qaab isku dheelitiran, waxaan ka heli karnaa Symbian, Linux, Windows, Mac iyo Android. Hadafkee ayaad hiigsatay mustaqbalka? Ma qorsheyneysaa inaad sii wado keenista Opera dhammaan barnaamijyadan, maaddaama aan u maleynayo inay meteleyso shaqo dheeri ah adiga?
Silsilado: Haddii ay u taagan tahay xoogaa shaqo ah in Opera loo keeno nidaamyo aad u tiro badan. Laakiin maaha wax badan -aad ayaan uga xoog badan nahay sameynta horumarinta «iskutallaabta» (madal badan)-. Waxaan sii eegeynaa suuqyada oo aan u beddeleynaa sida ay u kala mudan yihiin. Tusaale ahaan, mar dambe ma taageerno Solaris, Amiga ama BeOS, maxaa yeelay ma haystaan ​​suuq qiil u samayn kara dadaalka. Laakiin haa, bixinta biraawsarka ugufiican barxad kasta oo laxidhiidha waa hadaf guud oo aan kor uqaadi doono.
<° Linux: Mid ka mid ah xulashooyinka xiddig ee biraawsarka Opera ayaa ah Macaamiilkiisa Mail.Ma noqon doontaa wax waali ah in loo maleeyo in maalin uun ay ka go'i karto biraawsarka, madaxbannaan tahay oo sameysato koox sida Firefox / Thunderbird ah?
Silsilado: Maya waalan, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan sameyn doono. Eeg jawaabta aan ka bixiyo "Opera Lite" su'aasha, hoos ...
<° Linux: Waxa ii keenay su'aashan ayaa ah inaan si fudud uga fikiro Opera oo ah biraawsar. Waxaa laga yaabaa in macmiil "dibadeed" ka mid noqon kara macmiilka IRC, Macmiilka Boostada, iyo wixii la mid ah.
Silsilado: «Hoos ka eeg jawaabta ...»
<° Linux: Maxay tahay sababta isticmaalka Opera ee sareeyaa Hagaag, haddii aan isbarbar dhigno daalacayaasha kale, waxay leedahay adeegsi aad u sareeya oo RAM ah. Isticmaalka RAM runti ma wax xunbaa mise faa'iido ayey u noqon kartaa biraawsarka?
Silsilado: Isticmaalka RAM wuxuu kuxiranyahay waxa isticmaalaha rabo inuu sameeyo. Inbadan oo aad haysataa waxay kuu ogolaaneysaa hawl dhaqso badan, tusaale ahaan inaad aado bogga dambe (kii hore), arag boggaga horay loo sii arkay, ama maareeyo «Inbox» ee farriimaha 11902 (oo aan hadda haysto). Haddii ay dhibaato tahay iyo haddii kaleba waxay kuxirantahay arrimo qaarkood sida waxa isticmaalaha doonayo inuu sameeyo, haddii uu kaliya daalacanayo, maxaad ugu isticmaali weyday dhammaan xusuusta jirta si aad u siiso khibrada ugu fiican?
Isla mar ahaantaana, waa muhiim inaad awood u yeelan karto inaad ku shaqeyso xusuus yar haddii ay tahay waxa aad heysato, oo aad si cad ugu adeegsato xusuusta hab wax ku ool ah. Had iyo jeer waan ka shaqeyn jirnay taas, oo hadda baarayaal waaweyn ayaa ka fakarayay isla waxyaabo isku mid ah. Waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan horumarinno, tusaale ahaan, way adag tahay hadda in Opera shil galo ama ku guuldareysto xusuus la'aan xaalad kasta awgeed, tanina waxay ahayd shaqo adag oo lagu guuleysto. Waxaan sii wadi doonnaa inaan eegno xulashooyinka aan ka dhex samayn doonno inta u dhexeysa adeegsiga xusuusta iyo bixinta khibrad isticmaale oo hagaagsan, iyo sidoo kale inaan aragno haddii aan horumarin karno howlaha barnaamijka laftiisa.
<° Linux: Nooca "Iftiinka" ee Opera suurtagal ma noqon karaa? Taasi waa, kaliya browser iyo akhristaha RSS.
Silsilado: Dabcan waa macquul, laakiin waxay ku lug leedahay shaqo badan. Go'aaminta waxa jira iyo waxa aan daruuriga u ahayn nooca "iftiinka" sidaa uma cadda, taasi waa, maxaa RSS loogu diidayaa oo aan loogu dirin Boostada? Shaqeynta macmiilka BitTorrent waa wax waxtar u leh dadka isticmaala qaarkood, kuwa kalena ma oga mana u baahna inay ogaadaan inay jirto. Markaan fiirino fursadaha, waxaan ka fikiri karnaa inaan u beddelno waxqabadyada qaar "addons" (Dragonfly, Qalabka soo-saaraha ayaa sidaas u shaqeeya, in kasta oo qaybtani ka mid tahay wax soo saarkeeda horumarinteeda). Laakiin kala soocida astaamaha 5 ilaa 10 boqolkiiba isticmaalayaashu uma baahna inay ka caawiso guud ahaan guddiga. Waqtigan xaadirka ah waxaan leenahay soo dejin aad u yar-yar oo loogu talagalay biraawsar (waxay loola jeedaa culeyska MBs), oo shaqadoodu ay u taal kuwa doonaya iyagoon culeyska saarin dadka kale.
<° Linux: Opera waxaa laga yaabaa inuu ahaa biraawsar si khaldan loo fahmay, waxaa jira in badan oo hadal ah oo ku saabsan dadka kale, laga yaabee inay kuwani yihiin kuwo badan oo maalgashi ku sameeya xayeysiinta isla markaana abaabula isticmaalayaashooda wax badan, ama laga yaabo inaysan ahayn. Ma la wadaagi kartaa rajooyinkaaga koritaanka ee ku saabsan Opera suuqa Browser? Maxay tahay, haddii aysan ka liidan kuwa kale, maxay u maamuli weyday inay dhex gasho adeegsadayaasha?
Silsilado: Xaqiiqdii hal qayb ayaa ahayd xayeysiinta. Google, Apple iyo Microsoft waxay bixinayaan malaayiin si xayeysiiska TV-ga loo dhigo, lacagta intaa le'eg kuma dhigi karno suuqgeynta. Firefox Way korodhay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan bulsho aaminsan in ku dhow howl diimeed, marka lagu daro kasbashada inbadan oo ka mid ah adeegsadayaasheeda maxaa yeelay Google ayaa bixisay xayeysiinta iyo xitaa tas-hiilaadka laftooda. Waxaa xiiso leh in la xuso meesha Opera ay ku guuleysatay: dalalkii hore ee Soofiyeedka, oo leh aqoon farsamo guud ahaan aad u sarreysa. Waa inaan sidoo kale qirnaa in lacag weydiisashada biraawsarka ay taariikh ahaan noogu kacday (in kasta oo aan ka tagnay taas sanado iyo sannado), gaar ahaan Ameerika iyo Yurub (wax dhibaato ah kuma lahan Ruushka, laakiin iyaguna ma aysan bixin) .
<° Linux: Waxaan horay u soo sheegay in "guul" la'aan (ka fiirinta "guusha" dhanka suuq wadaagga) laga yaabo inay sabab u tahay faafitaanka bulshada oo yar, laakiin waxay noqon kartaa arrimo kale.
<° Linux: Tan waxaan uga jeedaa in isticmaaleyaal badani aysan wax dhib ah ku qabin isticmaalka Opera oo ah biraawsar, hase yeeshee inbadan, markay arkeen in liisankoodu yahay mid gaar ah, iska ilaali inay sidaa sameeyaan (inta badan bulshada GNU / Linux)
Silsilado: Marka la eego guud ahaan, maahan bulsho aad u ballaaran, sidaa darteed ma meteli karto qodob aad muhiim u ah. Taas macnaheedu maahan inaysan ahayn qodob.
<° Linux: Maxay Opera u ahayn OpenSource?
Silsilado: Maahan Meel Furan taariikh ahaan maxaa yeelay waxaan haysannay biraawsar aad u hufan, kaasoo aan uga iibinnay shirkado badan si aan lacag ugu helno, iyadoo macaashkan aan ku bixinay kuwa horumariyayaasheena. Ahaanshaha shirkad inta badan u heellan samaynta daalacashada, si ka duwan kuwa kale (halkaas waxaan ka mid ahay Mozilla / Firefox, taariikh ahaan waxaa bixiyay Google, IBM, Sun iyo AOL ka dib markii la waayey Netscape oo ah shirkad halis ah, qiyaastii sanadka 2000), waxay ahayd awood muhiim ah iibso faa'iidooyinka aan bixinnay.
Intaas waxaa sii dheer, istiraatiijiyaddeenna ah waxa la furayo way ka duwanayd Google / Apple / Nokia iwm. Halkii aan KHTML ka dhigan lahayn saldhig hore u ahaa il furan oo ay beel horumarisay, waxaan soo saarnay mishiinka, Horayba. Ma jiraan dad badan oo adduunka ah oo khabiirro ku ah nuucaas koodhka ah, markaa markaan helno iyaga ayaynu adeegsannaa (dabcanna waanu bixinnaa). Laakiin qaybta adeegsadaha adeegsigu mar walba aad ayuu uga furan yahay Opera, taas oo u oggolaanaysa bulsho weyn in ay isweydaarsadaan astaamahooda, oo ay ku soo mareen my.opera.com iyo goobaha 100% ka baxsan Opera.
<° Linux: Miyaadan u maleyneynin inay tani faa'iido noqon karto oo ay kordhin karto xawaaraha horumarka biraawsarka iyo qeybihiisa?
Silsilado: Guud ahaan, maya. Firefox waxay siisaa madax badan si ay u maareeyaan shaqada bulshada (maadaama shirkadaha, Mozilla Inc. iyo Opera ay soogaleen dakhli isku mid ah sanad kasta), soosaarayaasha kale ee daalacayaasha dhexdhexaad-furan waxay siinayaan kooxo badan suuq geyn badan. Waxaan si toos ah u siineynaa injineerada, taas oo noo ogolaaneysa inaan diirada saarno waxyaabaha aan mudnaanta siineyno, injineeradeenuna waxay abuuraan hal-abuurnimo badan oo aad loogu guuleystay.
<° Linux: Maxaad u dhihi laheyd kuwa adeegsada ee aan isticmaalin Opera oo badanaa ku saleysan nooca shatiga?
Silsilado: "Sidee tahay?"
Dhab ahaan, ugama jeedo in isticmaalaha uu yahay, ama waxyaabaha ay tahay inaan laga warqabin. Laakiin runtii waxay ila tahay aniga inay jiraan isticmaaleyaal ku khasaaraya xulashada sidan oo kale. Waa su’aal ah baahiyo, iyo ka fikirida faa iidooyinka iyo qasaaraha. Sure, isha furan waxay kuu oggolaaneysaa inaad bedesho sheyga, laakiin kaliya kuwa awoodda u leh inay sidaa sameeyaan. Tusaale ahaan kuwa caanka ah OLPC (laptop-ka $ 100) wuxuu ku adkeystay ilaha furan, in kastoo aysan macquul aheyn in kumbuyuutarka lagu daro ama la isku soo daro, koodhka Mozilla aad ayuu u cuslaa, waxayna ku qasbanaadeen inay jaraan shaqooyinka, marka Opera ay u shaqeyneyso sida ay la socoto awoodo kale oo badan.
Dhinaca kale, adeegsadayaashu waa inay ku adkaystaan ​​in biraawsarkoodu taageersanyahay heerarka, maxaa yeelay markaas oo keliya waxay si xor ah u go'aansan karaan inay doonayaan inay beddelaan biraawsarkooda, haddii berri mid kale uu ka dhakhso badan yahay, ama uu leeyahay shaqooyin xiiso leh, ama midab soo jiidasho leh, ama wax kastoo.
<° Linux: Maxay ka faa'iideysaa Opera inteeda kale daalacayaasha?
Silsilado: Astaantaadu way fududahay in la aqoonsado. Inta soo hartay waxay kuxirantahay waxa isticmaaluhu sameeyo. Aniga ahaan faa'iidooyinka muhiimka ahi waa:
Boostada, IRC, RSS / Atom iyo macaamiisha BitTorrent.
Awood u lahaanshaha.
Awood u lahaanshaha isku darka "qaabka gaarka loo leeyahay" iyo marinka caadiga ah ee tabka kala duwan
Better SVG taageero iyo gaar ahaan qaybta animation.
Awood u lahaanshaha inaad wax la wadaagto adoo adeegsanaya adeeg aad u fudud oo shaqsi ah (kuma jiro daruuraha) by Unite.
Awood u lahaanshaha inaan si fudud ula wadaago jawiga shaqadayda goobo badan (Waxaan sitaa aaladaha Mac, Linux, Symbian, Android iyo UIQ ka hor intaanan internetka ula tagin waxa jira).
Sirteyda sifiican ugu xafide amaankeyga sare.
Debugging Remote (mobilada, ama saaxiibada) Dragonfly.
Dadka kale ee aan aqaano, marka laga soo tago waxyaabaha aniga muhiimka ii ah, waxay ku raaxeystaan ​​xawaaraha, xaqiiqda ah inay ku shaqeyso nidaamyadii hore iyo sidoo kale kuwa casriga ah.
<° Linux: Isticmaalayaasha deegannada desktop sida Gnome, Xfce, KDE iyo marar kale oo yar ayaan dhibaatooyin kala kulannay nooca "muuqaalka" Opera. Si aan la rumaysan karin ugu fiican Gnome oo ah deegaanka sida KDE, Opera had iyo jeer si habsami leh ayey u bixisaa. Miyaad naxariis u lahaan laheyd inaad si kooban u sharaxdo sababta ay taasi tahay?
Ah. Waxaan leenahay soo koobid udhaxeysa shaqeynta iyo muuqaalka muuqaalka ee aan sanado badan ka qabaneynay barxad walba, qaabka MVC ("Model, View, Controller", oo ah qaab caadi ah aragti ahaan). Unix (noocyada Linux, BSD, Solaris, iyo xitaa noocyada Linux-ka oo aad ugu badan aaladaha sida TV-ga, "set top box", iwm) waxaan soo marnay sannado aan hubinayno inaan si sax ah u qabanno, halkii aan ka isticmaali lahayn a Qaybinta Linux oo ka tag inta hartay adduunka Linux si loo xalliyo dhibaatooyinka.
(Si gaar ah looga jawaabo su'aasha "Ma hagaajin doono koodhka haddii uu furan yahay, halkan waxaa ku yaal mudaaharaad muujinaya in jawaabta ay noqon karto 'qasab maaha' ...)
Waxaan leenahay maalgashi ballaaran oo Linux ah oo naga qaalisan wax ka badan Windows. Waxaan haynaa isticmaaleyaal badan oo Linux ah, laakiin dhammaantood dhammaantood waxay ka yimaadeen shirkadaha wax ku bixiya qaabka caadiga ah, welina waxaan haysannaa isticmaaleyaal badan oo ku jira Windows. Si kastaba ha noqotee, waa madal muhiim ah (inbadan oo naga mid ah ayaa ah isticmaaleyaasha Linux, tusaale ahaan) inaan sii wadno taageerada si aan u siino bedel wanaagsan ...
<° Linux: In badan ayaa looga dooday shabaqa iyada oo loo marayo shirarka iyo kuwa kale, oo ku saabsan hal-abuurnimada ay Opera ku soo kordhisay adduunka barnaamijka. Baadhitaanka tabbeddaran, FastDial, muuqaalka ama horudhaca bogga adoo dul dhigaya tilmaamaha jiirka tabka, waa uun tusaalooyin ka mid ah waxa loo malaynayo oo la yidhi, in Opera uu abuuray / ikhtiraacay.
Immisa run ah ayaa ku jirta tan? Haddii mid ka mid ah kor ku xusan ay run tahay, maxaad u malaynaysaa inta kale ee daalacashada ee suuqa iyadoo la isticmaalayo waxqabadyo markii ugu horreysay ay soo saareen Opera?
Silsilado: Waa run inaan soo bandhignay astaamo badan oo kuwa kale ay soo guuriyeen. Waana inay sidaas ahaato. Tan ugu liidataana waa marka qof isku dayo inuu xaddido, tusaale ahaan shatiyada, hal-abuurnimada iyo qaadashada fikradaha hagaajin kara webka adduunka.
<° Linux: Windows wuxuu leeyahay Internet Explorer oo ah biraawsarka asalka ah. Chrome OS ayaa lahaan lahaa Chrome, Gnome oo ah jawi desktop ah wuxuu leeyahay Epiphany, KDE oo leh Konqueror (in kastoo rekonq wadadeeda horay ayey usameyneysaa). Halka aan ku tagayo tan ayaa ah, waligaa miyaad tixgelisay isku day inaad wax ka qabato qaar ka mid ah jawiga desktop-ka
Si kale haddii loo dhigo, fikradda ah in Opera uu yahay biraawsarka asalka ah ee qaybinta qaar ka mid ah Linux oo adeegsanaya KDE ama Gnome, ma aha wax qalad ah haba yaraatee. Ma tixgelisay doorashadan?
Silsilado: Mararka qaar. Ma ahan soosaarayaasha, waxay dhacdaa markay codsadaan Opera. Taariikh ahaan, waxyaabo badan ayaa ka dhacay taleefannada, TV-ga, iyo aalado kale, mararka qaarna waxaa laga helayaa aaladaha desktop-ka, taasi waa sababta oo ah soo saarayaasha ayaa doonaya, ama qaybiyaha ayaa doonaya, tusaale ahaan, shirkado badan oo taleefanno ayaa weydiista kuwa soo saara inay ku daraan Opera iyo / ama Waxay ku shaqeysaa wax yar oo ku saabsan noocyada moobiilka ee ay iibin doonaan ama kor u qaadi doonaan.
<° Linux: OperaMini waa biraawsar leh boqolkiiba inta ugu badan suuqa ee casriga. Maxaad u maleyneysaa inay sabab u tahay guushaan cajiibka ah?
Silsilado: Waa waxtar badan, si fiican ayey u shaqeysaa, shirkadaha sida Telenor, Vodafone, AT&T iwm way xayeysiiyeen. Laakiin sidoo kale sababta oo ah waddammadii ay Opera horeba u lahayd saamiga suuqa ee xiisaha leh, sida USSR-tii hore, waxay ahaayeen hoggaamiyeyaasha kobaca shabakadda moobiilka. (Waxay ku leedahay saamiga sare mobilada guud ahaan - maxaa yeelay waxay ka shaqeysaa oo keliya "Smartphone" laakiin sidoo kale waxay ku shaqeysaa taleefannada casriga 10-sano ka hor, kuwaas oo markii horaba aad u "nacas ah" oo aan jirin meel kale oo dhab ah).
<° Linux: Miyaad ka welwelsan tahay in Opera oo ah biraawsar kombiyuutarku leeyahay boqolkiiba suuq aan loo qalmin?
Silsilado: Cad Laakiin khatar kuma aha jiritaanka Opera laakiin waa dhibaato weyn.
<° Linux: Ma leedahay wax maskaxda ku haya oo xaaladda u rogi kara gebi ahaanba, mise waxaad ku kalsoon tahay oo keliya in xilligu isbeddeli karo?
Silsilado: Waxaan ka shaqeyneynaa inaan wax ka bedelno inta aan awoodno. Waxaad dooni kartaa wax walba, laakiin maheysan kartid, sidaa darteed waxaan soo saareynaa badeecooyin si aan u siino khibrad adeegsi oo wanaagsan, waxaan isku dayeynaa inaan u sharaxno isticmaaleha waxa ay ku raaxeysan karaan ama ka faa'iideysan karaan, waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa inaan ammaan ku sugno shirkad ahaan, samaynta alaabada suuqyada iyaga doonaya
<° Linux: Waxaan ka aqrinay dib u eegisyada Opera 11.60 bogagga qaarkood, halkaasoo ay ku sheegeen in fursado badan oo lagu soo kordhiyay qaybtan aysan khaas ahayn, maadaama daalacashada kale sida Chrome ama Firefox ay horey u haysteen. Dhibaatadu waxay tahay in yar ayaa laga ogyahay Opera Next, oo ah nooca loo yaqaan 'Rolling Release version' ee Opera, halkaas oo hubaal in isbeddelada / hal-abuurnimadu ay goor hore soo socdaan. Ma u sharxi kartaa sida ugu fudud ee suurtogalka ah, waa maxay Opera Next, iyo sidoo kale faa'iidooyinkeeda iyo faa'iido darradeeda marka loo eego noocyada "la qaboojiyey" ee ay sii daayaan?
Silsilado: Opera Next waa nooca horumarinta. Waxay u oggolaaneysaa in la isku dayo waxyaabaha jiilkii ugu dambeeyay, laakiin waxay noqon kartaa inaysan lahayn xasilloonida lagama maarmaanka u ah in loo isticmaalo goob shaqo. Noocyada "la qaboojiyey" waxay soo mareen geeddi-socod adag si loo hubiyo tayadooda, taas oo macnaheedu yahay inay ka maqan yihiin astaamo cusub, laakiin ay ku kalsoon yihiin isticmaalka maalin kasta.
<° Linux: Waqtigan xaadirka ah, maxaad ku tilmaami lahayd taageerada Opera ee HTML5 iyo CSS3?
Silsilado: Wanaagsan, maadaama HTML5 iyo CSS3 aan weli la qeexin.
Ku darista nooca 11.60 ee processor-ka HTML5 (oo loo yaqaan Ragnarök), sida dhammaan daalacayaasha waxaan leenahay taageero ka badan ama ka yar qaybaha xasiloon ee HTML5 / CSS3. Waxaa jira kala duwanaansho, qof walbana shaqo ayaa u taal, laakiin markii HTML5 la dhammeeyo ma noqon doonto waqti dheer ka hor inta aan taageero heysan.
Qof yidhaahda «waxaan taageersanahay HTML5'Laakiin waa doqonimo inaadan ogeyn inay tahay wax aan macquul aheyn halka qeexitaanka laftiisa uu isbedelayo, ama wuxuu u maleynayaa inaan doqon nahay oo aan aaminsanahay.
Maaddaama qaybo ka mid ah noocyadu ay xasilloon yihiin, waxaan ka hirgelinnaa Opera, mararka qaarkood ka hor intaan qof walba keenin wax cusub hal-abuurnimada HTML5, marna qof walba, mararka qaarkoodna ka dib si loo hubiyo inaannaan u baahnayn inaan wax beddelno ka dib markii aan ku dhejinnay biraawsarka taas oo dhacda inta badan noocyada ugu horreeya ee shaqeynaya).
<° Linux: Shaki la'aan, plugins ama ku darida waa wax muhiim ah markaad dooraneyso biraawsar. Si kastaba ha noqotee, markii aan booqannay goobta plugins ee Opera xoogaa waan ka niyad jabnay, maaddaama biraawsarkan weyn uusan lahayn qalab tayo leh sida aad filan karto. Ma noo macnayn kartaa sababta xaaladdan jirta?
Silsilado: Waxaa jira laba shay oo maskaxda lagu hayo. Marka hore, kuwa lagu daro laf ahaantooda maahan waxa muhiimka ah, waxa muhiimka ah waa waxa lagu qaban karo biraawsarka. Taas awgeed, qalabku waa hab lagu sameeyo wax, wax badan iyo wax aan ka yareyn. Opera had iyo jeer waxaa lagu soo daraa marka loo eego qaab ahaan waxqabad badan oo daalacayaasha kale ay ku bixin karaan oo kaliya adoo adeegsanaya, sidaas darteed muhiim ma aheyn in la helo waxyaabo dheeri ah maxaa yeelay biraawsarku wuxuu horey u leeyahay shaqooyin badan oo dheeri ah.
Marka, waxaan waqti badan ku qaadanay inaan ka fikirno sida loo sameeyo nidaam kordhin oo ka jawaabaya rabitaanka isticmaaleyaasha iyo horumariyeyaasha. Dhab ahaantii, waxaan hadda ku bilownay taas (iyo shaqadayda ku dhex jirta Opera, waxaa ka mid ah soo saarista fursado cusub oo lagu kordhin karo oo aan ku soo bandhigi doono noocyo cusub oo Opera ah). Firefox waxay sannado qaadatay nidaamka addons, guud ahaan lagama maarmaanka u ah adeegsiga biraawsarka adduunka dhabta ah. Google ayaa lacag badan gelisay si ay u gaarto isla. Opera wuxuu ku koraa qaab dabiici ah, wuxuuna ka bilaabmaa meel aadan u baahnayn astaamo aad u tiro badan.
Intaas oo dhahday, waxaan sii wadaynaa ka shaqeynta hagaajinta fursadaha iyo kordhinta la heli karo.
<° Linux: Haddii qof doonayo inuu ku biiriyo qalab loogu talagalay Opera bulshada, ma jiraan hage, cashar ama dukumenti ka caawin kara hagitaankooda, ogaanaya cidda lala tashanayo, arrimaha liisanka, iwm.
Silsilado: Hubaal, waxaa jira macluumaad fara badan (casharro, dukumiintiyo API ah, tusaalooyin, iwm.) Http://dev.opera.com/addons/extensions
Qor tan fayl la yiraahdo config.xml
Tan kale mid la yiraahdo index.html
Y kan kale mid saddexaad, ayaa loo yaqaan soo baxa.html
Qaabka horumarinta, furi faylka config.xml gudaha Opera, waxaadna bilaabi kartaa ciyaarta ...
Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan ila soo xiriir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wareysiga wakiilka Opera (biraawsar) la cusbooneysiiyay
Shaqo wacan saaxiib 😉
Waa hagaag, runta ayaa ah, wareysi aad u fiican oo aan runtii ka helay
maxaa yeelay waxay ka shaqaysaa kaliya "Smartphone" laakiin sidoo kale waxay ku shaqaysaa taleefannada casriga ah ee 10 sano ka hor jiray, kuwaas oo durba aad u "nacas ah" oo aan jirin meel kale oo dhab ah oo dhab ah) ./ cite
Tani gebi ahaanba waa run, waan ogaa Opera waqti dheer kahor opera mini oo aan ku isticmaali jiray Siemems duug ah, waxayna la shaqeysay cajaa’ibyo, hada waxaa la igu dhiirigaliyay inaan u isticmaalo bedelka firefox ee netkeyga si aan u arko sida ay u shaqeyso.
Jawaab David Segura M
Ku saabsan wareysigan waxaan lahaan lahaa waxyaabo badan oo aan ka doodo, laakiin waxaan kaliya diiradda saari doonaa hadda qaybtaan:
<° Linux: Waa maxay sababta Opera aysan u aheyn OpenSource? Chaals: Maahan Meel Furan taariikh ahaan maxaa yeelay waxaan haysannay biraawsar aad u hufan, kaas oo aan uga iibinnay shirkado badan si aan lacag uga helno, iyadoo faa'iidooyinkaas aan ku siinnay kuwa wax horumariya. Ahaanshaha shirkad inta badan u heellan samaynta daalacashada, si ka duwan kuwa kale (halkaas waxaan ka mid ahay Mozilla / Firefox, taariikh ahaan waxaa bixiyay Google, IBM, Sun iyo AOL ka dib markii la waayey Netscape oo ah shirkad halis ah, qiyaastii sanadka 2000), waxay ahayd muhiim Awoodda iibiso faa'iidooyinka aan bixinnay. Intaas waxaa sii dheer, istaraatiijiyaddeenna ah waxa la furayo way ka duwanayd Google / Apple / Nokia iwm. Halkii aan KHTML ka dhigan lahayn, oo markii horaba ahaa il furan oo ay beel soo saartay, waxaan soo saarnay matoorka, Presto. Ma jiraan dad badan oo adduunka ah oo khabiirro ku ah nuucaas koodhka ah, markaa markaan helno iyaga ayaynu adeegsannaa (dabcanna waanu bixinnaa). Laakiin qaybta adeegsadaha adeegsigu marwalba aad ayuu uga furan yahay Opera, taas oo u oggolaanaysa bulsho weyn inay isweydaarsadaan astaamahooda, oo ay ku sameeyeen my.opera.com iyo boggag 100% ka baxsan Opera.
Waxaan u maleynayaa in saaxiibkaa Chaals uu caan ku noqday madaxiisa. Waayahay, waan aqbalay, Opera Waa biraawsar weyn oo taariikhda oo dhan ay caddeysay inay tahay wax soo saar wanaagsan, laakiin gebi ahaanba waxtar ma leedahay? Uma maleynayo.
Waa run in Mozilla (tusaale ahaan) maahan shirkad abuureysa daalacashada si ay "u iibiso" iyaga, laakiin aad ayay u culus yihiin waxayna si weyn u saameeyeen horumarka webka. Waa inaad aragtaa taariikhda Netscape si aad u ogaato in mahadsanid Mozilla, maanta Firefox waa meeshii ay ku taal. Oo waxaa jira waxa run ahaantii la jeclaan karo, waxay abuureen wax soo saar (Firefox) oo aan ahayn kaliya bilaash iyo il furan, laakiin sidoo kale ka sarreysa Opera dhammaan shirkadda ay gadaal ka lahaan karto.
Ragga ka tirsan Opera waxay horumariyeen Presto, waa hagaag taasi waa wax lagu farxo laakiin maxay fiicantahay in ay sameeyeen wax aan weli u dhaqmin sidii la rabay? Maaha in aan xuso waxyaabo farsamo, laakiin khibradeyda shaqsiyadeed, Firefox waxay had iyo jeer muujisaa waxyaabaha ka kooban degel ka fiican Opera.
Sikastaba, waxaa jira waxyaabo aanan fahmin:
1- Maxaad uga jeeddaa xaqiiqda ah in isku xirnaanta adeegsaduhu had iyo jeer ahaa mid aad u furan?
2-Xaqiiqda ah inay ka iibiyaan shirkadaha ma aha inay saameyn ku yeelato in Opera uusan ahayn il furan.
Uma arko jawaabta qalad ah, runti waxay sheegaysaa wax run ah, waxay sameeyeen wax soo saar wanaagsan, "waxtar badan", oo ku filan sidaa darteed waxaa jira shirkado lacag bixiyay oo sii wadaya inay bixiyaan oo sidaas ku badbaaday meel qaar kalena musalaf bay noqdeen oo way ku fashilmeen.
Firefox waa halka aysan ugu mahad celin Mozilla oo kaliya, laakiin sidoo kale mahad badan ayey u tahay Google iyo lacagteeda iyo mahadhooyin kale oo badan oo aan ugu mahadnaqayo dadka adeegsada halka aan naftayda ku soo daray muddo dheer. In la dhaho waxaas oo dhan mahadsanid Mozilla waa cadaalad daro, kaliya maahan xaqiiqda iyo shirkadihiisa maal galiya ee caadiga ah, laakiin dadka taageera isaga oo si bilaash ah ugu wacdiyey.
Haa, badeecadaadu way dhaaftay Opera laakiin waa haddii aan ka hadalno tirada suuqa; xagga tayada iyo shaqooyinka aan aad u jeclaan lahaa laakiin xitaa ma jiro wax u dhow.
Ugu dambayntii waxaad leedahay Presto way ku fashilantay maxaa yeelay "uma dhaqmayso sidii ay ahayd", waa inaad isweydiisaa laba shay, tan hore waxay tahay waxa ay ku tusi waydo inay yihiin wax caadi ah ama aan ahayn, ama haddii waxa aan ku tusin ay tahay iyadoo la dhuujinayo biraawsarka ama si toos ah maxaa yeelay waxaa lagu tijaabiyey oo loo habeeyey biraawsar isla shaqadaasna looma qaban Opera. Firefox "sifiican uma tusiyo waxyaabaha ka kooban degel", horumariyayaashu waxay ku sameeyaan websaydhadooda Firefox sidaa darteed dhammaantood waxay ku fiicnaan doonaan halkan. Xitaa maanta oo ah 2012, mudnaanta in si fiican loo muujiyo degel kuma xirna biraawsarka laakiin abuuraha ayaa si faahfaahsan ugu tijaabiyey biraawsarka sameeyey.
Markii aan noqday taageere Firefox (dib bilowgii) Ma ahayn Google ama xayeysiin midna, ee waxay ahayd dhammaan daalacashada aan isku dayey waqtigaas (Opera, IExplorer, Maxton ... iwm) wuxuu ahaa qofka kaliya ee u dhaqmay "sidii la rabay." Waqtigu wuu dhaafay Firefox wayna fiicnaaneysay sidookale kuwa kasoo horjeedaba inkasta oo aan isticmaali karo Chromium, Opera ama biraawsar kale, Firefox wali waa mida kaliya ee wax i tusaysa sida ay yihiin.
Haddii, sidaad sheegto, sababta ay tahay in horumariyayaashu ay boggooda ku tijaabiyaan Firefox, waa maxay sababta? Maaha in laga leexiyo qofna, laakiin ujeeddooyinkoodu waa inay lahaadaan. Intaas waxaa sii dheer, horumariye websaydh ama barnaamij sameeye oo boggiisa ka dhigaya kaliya biraawsar, ma ixtiraamo naftiisa (ra'yigayga shaqsi ahaaneed) .Haddaba, sidee bay u tahay bogagga ay booqashooyinka ka helaan malaayiin isticmaaleyaal ah, oo ka kala socda waddamo kala duwan, nidaamyada hawlgalka iyo daalacashada. waxay si fiican u muujinayaan 100% Firefox ee ma ahan kuwa kale?
Ma garanayo, waxaa jira wax aan shaandhayn ...
Waxaan ku dhaaranayaa ma jecli ka jawaabista intaas dheer ee XD.
Waxaa jira kuwa ku noqday taageere mahadnaqa xayeysiinta Google, kuwo kale waxay ku mahadsan yihiin wacdinta qof horey u ahaa taageere iyo kuwa kale kaligood. Laakiin sababtu maahan waxa muhiimka ah, muhiimaddu waxay tahay in dadkani mas'uul ka ahaayeen qaadashada Firefox halkii ay timid, iyagoo beeniyay inay tahay caddaalad darro iyo taariikh-diid.
Markii aan isku dayey Firefox ama waxkasta oo loogu yeero waqtigaas, kaligeed maahan mid "u dhaqantay sidii la rabay" maxaa yeelay waqtigaas IE4 iyo IE5 labaduba way sameeyeen sababtuna waxay ahayd websaydhada iyaga ayaa loo sameeyay. Xaqiiqdii, biraawsar u hogaansanaanta halbeegga wuxuu noqon doonaa mid fool xun oo muujinaya shabakadda waxaanan xusuustaa in waqtigaas in badan la dhahay (iyadoo lagu faanaayo jidka) in Firefox ay hirgelisay waxyaabo badan oo isku dayaya inay "ku daydaan" habdhaqanka IE; dabcan waxaa si maldahan loo sheegay in tani ay ahayd mid qiimo ugu fadhida daacadnimada heerarka laakiin taasi lama sheegin.
Waqtigiisii, inbadan oo naga mid ah waxaan u badalnay Firefox sababo la xiriira "dabeecad" maadaama tan aysan waligeed sabab u noqon karin in la badalo, laakiin sababo kale oo doqonimo ah sida "dagaalka loogu jiro kaligood-baxa", "saliibiyiinta loogu talagalay internetka bilaashka ah" iyo kuwo kale oo cawsduur ah oo muuqaal ah oo u eg inaad ka soo saartay Sayidka Giraan, laakiin carruurnimo iyo qof kasta oo aan khibrad u lahayn inuu tuuro dhagaxa ugu horreeya.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in waxyaalahan kaliya ay ku soo da'een Firefox oo aysan ku xirneyn dhammaan beddelka IE inkasta oo aragti ahaan ay tahay inay noqoto, taasi waa sababta aan u leeyahay in finalka dhammaantood uu ahaa wacdinta iyo sheekaysiga xiisaha leh. Ka dib markii mid loo beddelo (Firefox), mid baa soo helay oo jeclaaday waxyaabaha qaarkood, sida baalasha indhaha (in kasta oo ay muddo dheer jireen fursado kale) iyo xitaa naadirnimada kordhinta.
Maxay horumariyayaashu ugu sameynayaan goobahooda Firefox? waxay noqon kartaa sabab kasta ha noqotee, Laakiin u qaadashada si fudud in ay tahay sabab sax ah waa caqli-gal been ah.
Waxaa jira dhowr sababood oo igu dhaca sababta ay tani u dhacdo:
- Sababtoo ah waa biraawsar leh qoondo badan sida had iyo jeerna horumariyayaashu boggooda uga dhigaan daalacashada caanka ah. Sababta noloshiisa oo dhan.
- Sababtoo ah horumariyayaashu waa bini'aadam, bini-aadamkuna waxay u muuqdaan kuwo xagjir ah, marka laga hadlayo barnaamijyada software-ka waxay u muuqdaan inay jacayl la yeeshaan codsiyada
- Intaa waxaa dheer, internetka, oo aad ugu badan kooxda wax soo saarta, waxaa jira ku dhowaad saliib diimeed lagu soo koobay saliibiyiintii epic ee aan horay u sheegay, taas oo ku xaddidan militariga sida PRO Firefox iyo ANTI IE.
- Maxaa yeelay way jirtaa fikradda guud ee waxyeellada leh ee ah in Firefox ay tahay heerka. Sababtoo ah waxaa jira dad badan oo si khaldan u adeegsada isla'egta beenta ah ee "barta waxay ku egtahay Firefox barta way fiicantahay", "haddii aysan u muuqan wax fiican Firefox goobta way xun tahay", "haddii ay tahay iyadoo loo eegayo heerarka ay tahay inay shaqeyso ku jira Firefox ", iwm. Firefox maalmahan ka fog inay ahaato hawada cusub ee webka waa kansarka shabakada sababtaa darteed, waxay buuxineysaa heerka waxayna sameynaysay sanado badan, ilaa iyo intii ay jirtay.
In horumariyaha sameeya websaydhadiisa hal bog aan la ixtiraamin? Hagaag waxaa jira iyo kuwa badan. Waxaan qiyaasayaa in dunida dhabta ahi ay u shaqeyso si ka duwan habkii “akhlaaqda”, tii “sharafta lahayd” iyo wixii la mid ah.
Intaas waxaa sii dheer, jawaab kale waxaan dhigay xiriir halka ay jawaab bixiyayaashu ku qirteen nidaamkan, oo waliba aan qarsoodi ahayn oo meelo badan laga arki karo, gaar ahaan kuwa u heelan arrimaha horumarka; waa ficil ahaan dogma horumar en Firefox.
Maxay boggaga waaweyn ee caanka ah uga faalloodaan caajisnimada noocaas ah? Wixii aan horay u idhi ka sokow, waad ogtahay. Waxaa laga yaabaa in waaxda horumarinta websaydhadu ay dabaqdo sharciga guud ee samaynta hadalka oo ay dhahaan waxaa jira kumanaan daalacashada kumana mudna in qof walba lala shaqeeyo oo kaliya 1, 2 ama 3 ayaa ku filan maxaa yeelay waa 90% suuqa iyo in haddii qof yimaado 10% iyaga ka mid ah waxay dhigaan astaamo ka digaya inay "cusbooneysiiyaan" shabakad kale, taas oo u muuqata inay tahay "aqlaaq ahaan la aqbalay" midowgaas, ama aysan si fudud waxba u oran tan iyo "iyagu waa kuwa og "iyo Dhowr jeer kormeerayaashu waxay rumaysan yihiin waxa adiga kugu buuqaya, ugu yaraan xilliyada nasashada ee arrimaha farsamada.
Iskusoo wada duuboo, goobahan, inkasta oo aysan u muuqan doonin, hadana kuma ahan isbadal joogto ah, marka isbadal waa mid aad qaali u ah (goobta) ama aad u hawl badan / qaali ah (horumariyayaal) si ay u siiyaan taageero buuxda oo saxo.
Opera waa biraawsarkeyga aan ugu jeclahay, runtiina kama maqna "kordhinta" ay wax badan ka sheegaan daalacayaasha kale, waxay noqon doontaa inaanan u baahnayn howlo badan oo biraawsar ah, ama kuwa aan u baahanahay horay loo siiyay by ahaan oo ma arko baahida loo qabo in wax badan la raadiyo.
Marka hore MichaelSOG:
Aragtideyda waa sidaada oo kale, laakiin taa beddelkeeda. Opera waxaa ku jira waxyaabo badan oo aanan u baahnayn (sida macmiilka boosta). Waa biraawsar aad u fiican, laakiin haddii aan qaadan karo waxyaabaha aanan u baahnayn (Boostada, Bittorrent, laga yaabee akhristaha RSS) si aan u fududeeyo, laga yaabee inay ka mid noqon laheyd beddelkeyga koowaad.
Salaan iyo mahadsanid joojinta
elav, in waayo-aragnimadaada biraawsarkani uu xun yahay, macnaheedu maahan in kuwa kale sidoo kale, ilaa maanta aysan waligey i siin wax qalad ah, marka laga reebo arrinta flash marka ay leedahay wax ka badan hal tab oo leh flash oo aan awoodo iskuday saacado iyo saacado, intaad soo degsanaysid, aqrinaysid waraaqaha iyo qorista masraxa ee opera.
Waxyaabaha kale ee aan ku raacsanahay Chaals, gaar ahaan arrinta shatiyada, marka uma baahnid inaad xayeysiiso sida chrome ama firefox, way adag tahay inaad furato lambarkaaga, si fudud maxaa yeelay qof ayaa imaan kara, wax ka beddeli kara, dib u sii qaybin kara oo sameyn kara Tusaale ahaan, daalacashada caanka ah, oo anigu layaabi maayo haddii ay jiraan shatiyo dhexda ku leh soo saarayaasha.
Immisa ayaad adeegsataa biraawsarka (Opera)? Kama hadlayo khalad markii aan galayo YouTube, ama aan wax ku ciyaarayo flash-ka (taasi sidoo kale). Waxaan ula jeedaa qaabka ay Opera u soo bandhigto walxaha degel, kaas oo xitaa awood u leh inuu soo raro qaabka css ee leh meelaha qoraalka, sanduuqyada, raadiyaha badhanka iyo kuwa kale. Weli kuma guuleysan in aan yareeyo sawirka markii aan wax ku qoro WordPress, in kastoo Chromium midkoodna uusan sameynaynin. Yuu qabtaa? Firefox ..
Waxaan u isticmaalaa xafiiska inaan ku daabaco wordpress sidaa darteed ma garanayo waxaan kuu sheego, laakiin waxaan u adeegsadaa opera in ka badan 10 saacadood maalintii, in kasta oo toddobaadyadii u dambeeyay aan ku isticmaali jiray tusaale ahaan daaqadaha
Maxay taasi kaliya kuugu shaqeysaa adiga Firefox? Jawaabtu ma ahan maxaa yeelay Firefox waa halbeega; Jawaabta horay baan u idhi, waa sababta ay u sameeyeen inay ka shaqeeyaan Firefox iyo wax kale. Kahor, waxyaabaha waxaa loo sameeyay inay ka shaqeeyaan IE4, IE5 iyo inta hartay inay cunaan.
Waxba isma bedelin, kaliya de facto standard, hadda lama dhaho IE5 laakiin waxaa loo yaqaan Firefox.
Marka waxaad ii sheegeysaa in WordPress loo habeeyay kaliya Firefox? Waxaan qabaa su'aal, maxaa yeelay anigu ma ihi barnaamij-soo-saare web. Waxay u egtahay inaad adigu igu tiri 1 + 1 aniga waa 2 iyo kuwa kale waa 3 .. 🙁
JS waa isku mid, laakiin mishiinka iyo habka loo turjumo ayaa ku kala duwan biraawsar kasta.
Kajawaabida su'aashaada koowaad, ma aqaano maxaa yeelay ma isticmaalo goobtaas ama ma arkin koodhka, laakiin sida ku cad markhaatigaaga oo u muuqda, inay ku adag tahay inay wax kale noqoto.
Su'aashaada labaad, runti maya maxaa yeelay waxay kuxirantahay dhowr shay.
Marka hore, ma jiro biraawsar fuliya 100% qeexitaannada heerka, ha ahaato waqti, kakanaanta, qaladka bini'aadamka ama khiyaano yar, waxaa jira xitaa kuwa fuliya qeexitaanno kale (aan caadi ahayn) "iswaafajin"
Haa, waa run, waxaa jira daalacayaal ay xayaysiintooda inta badan ku sheegaan inay yihiin "heerka" laakiin runta maahan.
Hadda, wax kale ayaa ah in qeexitaanka javacript (ECMAScript) uu yahay mid keliya, oo ay tahay, laakiin sidii aan horay u sheegay, wax kale waa hirgelinta daalacashada.
Maanta Opera waa biraawsarka 1 + 1 waa 2 ku dhowaad gebi ahaanba gebi ahaanba qeexitaanka ECMAScript.
Waad ku mahadsantahay cadeynta .. ^^
Opera mini runtu waxay leedahay dhammaan ixtiraamkayga.
Iyo qaabka pc-ga waxa aan jeclahay waa inaan awood u yeesho inaan u wareego tabyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa caadiga ah. Sida kor ku xusan, bogagga qaarkood waxay u muuqdaan kuwo kufiican daalacayaasha qaarkoodna kuwa kale waa kuwo aan laqabsan karin.
Haysashada netbook, cabashadayda kaliya ayaa ah inta RAM ah ee ay isticmaasho, haddii kale waxay si fudud u noqon lahayd kuwa aan ugu jeclahay. In kasta oo aan ku dari lahaa in isdhexgalka uu wax badan kaga duwan yahay kuwa kale, laakiin taasi horeba waa arrin dhadhamin. Salaan.
Haddii aan talo kaa siin lahaa, waxaan kuu sheegi lahaa inaad sameysid Linux distro a la Chrome OS, laakiin ku saleysan halkii rpm laga dhigi lahaa Sabayon ama Arch oo ah kuwa ugu dhaqsaha badan.
Iyo dabcan Opera oo ah interface. GTK3 waxaad xitaa ku maamuli kartaa biraawsarka tartame biraawsar kale.
Mawduucyada menu-yada iyo is-dhexgalka barnaamij-fudud, markaa, iyagoo isku madal ah, qof kastaa wuu dooran karaa muuqaalka uu aad u jeclaa inta ugu badan ama inuu ikhtiraaco kuwa cusub.
Daabacaadda muuqaalkan ayaa lagu rakibayaa meelo kale
Iyo dabcan samee nooc ARM ah oo OS ah, kaas oo loo rakibay barnaamij ahaan VNC ama asal ahaan maadaama mashruuca mozilla uu damacsan yahay inuu OS u sameeyo moobiillada wata barnaamijyada HTML5.
Taasi haddii aysan ka qaadin Dr. Presto, qalab loogu talagalay Opera inay ku dilaan waxyaabo waaweyn.
Firefox way ku soo kordhay mahadsanid bulsho aaminsan aaminaad diineed
Taasi waxay ka badneyd wax kasta si looga fogaado duubis xun
Haa, laakiin haye, waxaan arkaa diin badan kuwa isticmaala chrome xD
Wareysi aad u fiican, waa waxa kaliya ee aan idhaahdo, Opera wuxuu ahaa biraawsarkayga udhigma in kabadan 7 sano, waxaan ugu isticmaalaa netbook-kayga Arch, PC walaashay ah ee Windows, goobtayda shaqada Fedora, ee makbookga saaxiibaday, iyo Nokia x2, dhammaantoodna waa la waafajiyay.
Waxaan u maleynayaa in faahfaahin aad u muhiim ah ay maqan tahay, Opera Turbo iyo awooddeeda ay ku dhex socoto shabakadaha qunyar socodka ah, waxaan ka imid Kolombiya waxaanan la shaqeeyaa bulshooyinka asaliga ah, iyo marka aan u safrayo dhulalka fog fog ee aysan ku xirneyn wi-fi, ama fiilooyin, kaliya waxaa loo isticmaalaa modem 3G, halka firefox uu isku dayayo inuu bogga ku shubto xawaaraha EDGE ama ka hooseeya, Opera turbo waxay ii ogolaaneysaa inaan furo bogag badan xawaare la aqbali karo, aniga oo aan dib u shubin RAM-ka anigoo ka xiraya fiilooyin sida flash iyo java (haa, opera wuxuu noqdaa opera mini), iyo "habka xawaaraha yar ee bandwidth" ee macmiilka iimaylka ayaa ii ogolaanaya inaan isticmaalo xisaabahayga GMail, GMX iyo MyOpera aniga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Wareysiga waa mid aad u xiiso badan, waxaan ku raacsanahay mowqifyo badan oo Chaals ah. Tusaale ahaan, waa run inay iyagu waxyeello ka geysteen markay doonayeen inay lacag ka qaadaan biraawsarkooda, ka dibna ay ugu deeqaan sidii ay ula wadaagi lahaayeen xayeysiinta. Markay falceliyeen Firefox way cuneen.
Waxyaabaha kale anigu kuma raacsani wax badan, ama qaar ka mid ah su'aalaha, gaar ahaan mid: isticmaalka sare ee loo malaynayo inuu leeyahay RAM. Haddii aan ka hadalno xusuusta, Opera waxay isticmaashaa wax ka yar Firefox (oo muddo dheer tan iyo markii ay joojisay kheyraadkaas cunaya ee qaarkood ku eedeeyaan) iyo wax aad uga yar kan Chrome. Waxyaabo kale ayaa ah in mid kastaa uu tixraacayo waayo-aragnimadiisa illaa iyo inta laga dareemayo "dareenka culeyska". Taasi way ka duwan tahay. Rikoor ahaan, waxaan ka doorbidaa Firefox iyo Chrome marka loo eego Opera, si hufan sababtoo ah xaaladdooda sida software Open Source (in kasta oo Chrome uusan ahayn mid gebi ahaanba furan), taas oo ah qodob kale oo aan si xushmad leh ugu ceshado guriga dhabanka.
Opera had iyo jeer waxay laheyd tiro wanaagsan oo adeegsadayaal wacdiya, oo haddii aysan helin deeqo sida Firefox ma caban karaan, sababtoo ah si sax ah ayey ahayd maxaa yeelay waa ilo ilo xiran (Waan ku raacsanahay sida ay tahay fikradaha ay awoodday inay caawiso iyaga, laakiin si loo xaqiijiyo wax la mid ah ...), marka lagu daro saamigeeda suuqa, in Firefox aan la siinin lacagta sidoo kale.
Opera waa software aad u fiican, laakiin sidoo kale Firefox iyo Chrome, iyo faa iidooyinka udhaxeeya daalacayaashan ayaa ah kuwa aad ugu baahsan waxa muhiimka ah aakhirka waa adeegsade, dookhooda iyo baahidooda (iyo halka aqoontooda iyo xiisehoodu u socdaan, dabcan). Maanta, tusaale ahaan, isticmaale kasta oo adeegsada adeegyada Google ee adeegsada Opera waa inuusan noqon mid aad u faraxsan, sida ku dhacda Chrome iyo Firefox (maantana, Google miisaankeedu aad buu uga badan yahay Opera). Anigana waxaan qiyaasayaa in ciladdu ay kajirto Google, oo waliba ciqaabta Konqueror kula leh KHTML arrintan, laakiin waa wax uusan isticmaaleha caadiga ahi wax been ah ka sheegin.
By habka, Opera ma aysan abuurin tabs, si kastaba ha noqotee iyaga ayaa caan ku ahaa.
Hagaag, salaan iyo bogaadin waraysiga, aad ayuu u fiicnaaday 🙂
Waad salaaman tahay metalbyte, waa farxad inaad halkaan kugu aqriso waana ku mahadsantahay qoritaanka :).
Waxyaabaha kale anigu kuma raacsani wax badan, sidoo kale qaar ka mid ah su'aalaha, gaar ahaan mid ka mid ah: isticmaalka sare ee loo maleynayo inuu leeyahay RAM. Haddii aan ka hadalno xusuusta, Opera waxay isticmaashaa wax ka yar Firefox (oo muddo dheer tan iyo markii ay joojisay kheyraadkaas cunaya ee qaarkood ku eedeeyaan) iyo wax aad uga yar Chrome. Waxyaabo kale ayaa ah in mid kastaa uu tixraacayo waayo-aragnimadooda illaa iyo inta laga dareemayo "dareenka culeyska". Taasi way ka duwan tahay. Rikoor ahaan, waxaan ka doorbidayaa Firefox iyo Chrome marka loo eego Opera, si hufan sababtoo ah xaaladdooda sida software Open Source (in kasta oo Chrome uusan ahayn meel gebi ahaanba furan), taas oo ah qodob kale oo si xushmad leh aan guriga ugu xaaqi doono wax yar dhabanka.
Ninkee Nooca Opera ayaad isticmaashaa? Sababtoo ah kuwa aan adeegsaday midkoodna kama cunin wax kayar Firefox ama Chromium. Uma maleynayo inay kaliya ku jirto kombuyuutarkayga, dadka kale ee isticmaala (tusaale ahaan KZKGGaara) waxay ku farxeen markay arkeen kororka isticmaalka (700Mb oo keliya Opera). Laakiin haye, haddii khibradaada shaqsiyeed aad dhahdo wax ka yar ayaad cuntaa, markaa anigu ma ihi kan wax beeniya.
Hagaag, had iyo jeer waxaan isticmaalaa midka ugu dambeeya, hadda 11.60. Xaqiiqdii, hadda waxaan la socdaa laba kumbuyuutar, Xubuntu 11.10 iyo openSUSE 12.1 (KDE) labadaba farqiguna wuu cadyahay marka loo eego Firefox 9, iyo sida Chrome / Chromium u furan 10 tab, iska ilow. Laakiin waa wax aan aad u cadeeyay, waana sababta aan aad ula yaabay oo hada la dhaho Opera wax badan baa cuna marka wax sidan oo kale ah waligood lama dhihin.
Kaliya xiisaha darteed, qof ma dhajin karaa shaashadda si uu u eego?
Iyo windoseros-ka meesha, oo aan u arko inay aad u yaryihiin, hadda waxaan maqleynaa wax badan oo ku saabsan Maxthon 3, waxay u dhigeen sida ugu dhaqsaha badan suuqa uguna fiican HTML5 maaraynta (qeexitaannada lama dhammeyn doono, laakiin waxay ku sugan tahay internetka) ).
Tijaabi Opera Next ... Waxaan kuu xaqiijinayaa inay yeelan doonto horumarin badan.
Chrome gabi ahaanba ma furna, laakiin hadaanan khaldanayn chormium haa. Markii aan xoogaa baaray ayaan helay macluumaadkan. In kasta oo aysan ahayn mowduuc xiran oo aan ka fikiro badiyaa, xorriyadda koodhku waa ii mudnaan aniga, daalacashada ama softiweer kasta.
Markaan guriga imaado waan tijaabinayaa.
Su'aashaydu hadda waxay tahay haddii chrome / chromium asturnaanta loo qaabeyn karaa illaa heer aan lagaa kormeerin, mise had iyo jeer waa ugu yaraan.
Aad baad u mahadsantahay kana xumahay inay culus tahay 😀
Browser-ku maahan waxa kaliya ee uu mid (adeegsadaha) la falgalo shabakadda, sidaas darteed biraawsarku wuxuu sameeyaa, waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo doorto biraawsarka, iyo sidoo kale OS (Operating System), sidoo kale innaguba waa inaan ka taxaddar waxa aan saarnay shabaqa.
Ha welwelin, saacado yar gudahood waxaan soo daabici doonaa qoraal ku saabsan amniga internetka, talooyin, iwm
Waxaan kugula talinayaa inaad sugto oo aad aqriso, i aamin aniga waxay noqon doontaa muy aad u xiiso badan
PS: HAHAHA maya haba yaraatee, waa wax lagu farxo in la caawiyo haha
Guud ahaan jawaabo fiican ayey ahaayeen laakiin aniga waxaa igu maaweeliyay "ama miyaad u maleyneysaa inaan doqon nahay oo aan aaminsanahay", maxaa yeelay runtu waxay tahay inay jiraan dad badan, "doqon" badan oo aaminsan sheekooyinka HTML5 taageero iyo qiimo jaban waxayna siinaysaa qiime dhab ah tijaabooyinka HTML5 iyo HTML5 demos, iwm.
Juneer J dijo
Hal shay oo uu Mr. Chaal iska indhatiray ayaa ah in Google aysan wax lacag ah siin Mozilla, arintaan marar badan ayaa laqabtay dadkuna had iyo jeer way qalad fahmaan. Inay ilaaliyaan qandaraasyada waa run laakiin ninkaan aad buu usocdaa.
In kasta oo Google joojiso maalgelinta (waa inaan sugnaa ilaa 2013), Mozilla waxay leedahay shuruudo la abuuray si aysan saameyn badan ugu yeelan.
Jawaab ku sii Juneer J
Waxa uu sheegay waa wax dhab ahaan dhacay oo aan si sax ah ugu gudbinaynin qandaraaska oo maanta wax badan la maqlayo.
Ugu horreyn, Google laga soo bilaabo "maalinti kowaad" waxay qaadatay Mozilla oo ay u sii gudbisay lacag, xitaa iyadoon waxba ka ahayn nolosha. Runtii Google sidan ayuu ku kasbaday jacaylka dad badan oo jilicsan isagoo u muuqday nin wanaagsan "ma xuma" oo taageeray mashaariicda bilaashka ah si loo joojiyo sharka Microsoft iyo IE. In kasta oo ay marwalba "qaas" ahayd Mozilla haddana waxay sidoo kale ku samaysay mashaariic kale (Wikipedia, OpenOffice, iwm).
Arrin kale ayaa ah inay bixisay rakibidda Firefox iyo xayeysiinta. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay degel aadna dhigto badhanka "Download Firefox", qof kasta oo gujiya, Google wuxuu ku siiyay hal doolar. Dabcan, dad badan ayaa sidoo kale badhan iska dhigay iyaga oo aan iska diiwaangelin AdSesne dabcanna wax lacag ah kama aysan qaadin, laga yaabee in ay ku sameeyeen ku dayasho iyaga oo aan ogeyn in ay ahayd dadaal la bixiyay.
Sikastaba, waxaan uhelay siidayn iyo maal galin, runtiina malahayga xasuusteyda ayaa qaldan, laakiin waxaan u maleynayaa in xitaa ay jirtay xitaa markii aad la soo gashay IE duug ah ay ka muuqan doonto Google "waxaad isticmaaleysaa biraawsar hore rakib Firefox." Oo waxaad ii sheegtaa in biraawsar kale uu leeyahay bog Google ah.
Kuwani waa waxyaabo dhacay laakiin inbadan ayaa umuuqda inaysan ogayn.
Miyaan isticmaalaa Firefox? HAA, waxaa jira sababo badan,
Ma leeyahay opera? haa,
Sababta maxaa yeelay waa dhowr madal iyo sababtoo ah ma aqaano biraawsarka ay macaamiisha isticmaalaan oo sida iska cad waa inaan hubiyaa shaqadeyda (In Firefox, Chrome, Opera)
Ma haystaa IE? Sababtu maaha maxaa yeelay ma ahan madal badan,
Sideen ku hubiyaa in waxa aan ku sameeyo IE ay shaqeynayaan iyo in kale? Fudud, ma sameeyo, QA ayaa aniga ii sameeya (shirkadda ayaan ka ahay marka laga reebo).
Opera taariikh ahaan wuxuu ahaa biraawsarkeyga aan door bidaa ilaa ay bilaabeen inay lumiyaan dib ugu laabashadooda qeybta 8 (Waxaan u maleynayaa nooca ugu dambeeya ee aan isticmaalay inuu ahaa 7.56, ilaa waqtigaas waxaan ahaa taageere Opera ah).
Waqtigan xaadirka ah maahan biraawsar xun, liddi ku ah, Presto waa matoor weyn iyo Dragonfly waa mid aad u fiican, runtii waxtar leh, laakiin waxaa jira faahfaahin qaar aan u baahanahay inaan hagaajiyo si aan uga dhigo biraawsarkayga aan jeclahay:
1. Iftiinka Opera! (Ama Mini): fadlan jooji nacasnimadaada fikraddaada "Aynu dhigno wax kasta oo dadku u adeegsadaan Opera si aysan u isticmaalin wax aan ka ahayn badeecadeenna."
Haddii biraawsarku ku laabto inuu ahaado, biraawsar, wuxuu kasban doonaa dhibco badan. Kaliya biraawsarka, oo aan lahayn macmiilka boostada, RSS, BitTorrent (WTF!), Midoobid ama wax kale oo aan macno lahayn, oo badiyaa ah addons / plugins / kordhin, laakiin aan ahayn qayb aasaasi ah biraawsarka.
2. Opera waxay qaadataa ilo aad u tiro badan, sida Chrome / Chromium laakiin iyadoon haysan dhamaan nidaamka sanduuqa sanduuqa ee ay leeyihiin bog furayaashani.
3. Smooth-scroll: waxay umuuqataa doqonimo, laakiin tan iyo markii aan bilaabay isticmaalka Firefox iyo Chromium oo leh astaantan oo firfircoon (iyada oo loo marayo plugins-ka saddexaad) waxay igu noqotay ficil ahaan aniga inaan ku dhex maro shabakada, warqad duuduub ah ayaa ka mid ah hal-abuurka weyn Tufaaxa… (oo kujira Chromium «Wheel Smooth Scroller» iyo Firefox «Weli Wareeg Kale oo Si siman u Socda»).
4. Adeegsiga Gmail ee Opera waa jirdil - haddana! Waa mid aad u gaabis ah, xitaa Qupzilla way ka fiican tahay Opera oo leh Gmail (ma Presto ayaa dhibaato ah?)
Wareysi wacan, wuu gaabnaa!
Waxay u shaqeysaa si sax ah - Waxaan u maleynayaa inay tahay biraawsarka kaliya ee leh iskudhaf siman oo si fiican u shaqeynaya, waxay noqon laheyd Chrome iyo Firefox kuwa aan haysan, muuqaalkaas waxaa bixiyay kordhin.
Haa, waxaan ula jeeday dardargelinta.
Arrinta ay fududahay in aan lagu samayn Opera anigu garan maayo, nidaamka kumbuyuutarka ee furaha kumbuyuutarradu waa mid aan sugnayn oo ilaa API-ka la kobciyo oo la ballaadhiyo waxaa jira waxyaabo badan oo aan la samayn karin, tusaale ahaan Xmarks, muhiim si loo waafajiyo calaamadaha u dhexeeya bog furayaasha kala duwan - nooca loo yaqaan 'Opera' waa mid la soo raray, waxay dib ugu weecineysaa websaydhka shirkadda halkaas oo ay ku caddeeyeen in xilligan Opera uusan lahayn dabacsanaan uu ku rakibo qalabka, dhab ahaantii Lastpass, sidoo kale isla shirkaddaas , waa milicsi cirro leh oo ku xiga qaabkeeda Chrome / Chromium iyo Firefox.
Hagaaji khilaafka Wicd ee ArchBang